မက်ဆီ အတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်နေမိတဲ့ ဂရစ်ဇ်မန်း - SPORTS MYANMAR
မက်ဆီ အတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်နေမိတဲ့ ဂရစ်ဇ်မန်း
ဘာစီလိုနာ အသင်း တိုက်စစ်မှုး အန်တွိုင် ဂရစ်ဇ်မန်း ကတော့ ယမန်နေ့ ညက ကစား ခဲ့တဲ့ လာလီဂါ ပွဲစဉ် မှာ အသင်း ဖော် လီယွန်နယ် မက်ဆီ ဒဏ်ရာ ရရှိ သွားခဲ့ မှု နဲ့ ပတ်သက် ပြီး ၀မ်းနည်း စိတ်မကောင်း ဖြစ် မိခဲ့ ပါတယ် လို့ ထုတ်ဖော် ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။ မက်ဆီ ဟာ ဗီလာ ရီးရဲ အသင်း ကို ၂ – ၁ ဖြင့် အနိုင် ရခဲ့တဲ့ မနေ့ ညက ပွဲ ရဲ့ ပထမပိုင်း အပြီး မှာ ဒဏ်ရာ ကြောင့် လူစားလဲ ခဲ့ ရတာ ဖြစ်ပါတယ် ။
Barcelona’s Argentine forward Lionel Messi (R) reacts after being treated by medical staff, during the Spanish league football match between FC Barcelona and Villarreal CF at the Camp Nou stadium in Barcelona, on September 24, 2019. (Photo by LLUIS GENE / AFP)
ဘာစီလိုနာ အသင်း ဟာ ဒီရာသီ အတွက် ပထမဆုံး အကြိမ် အဖြစ် မက်ဆီ ၊ ဂရစ်ဇ်မန်း ၊ ဆွာရက် တိုက်စစ် အတွဲ ကို ပွဲထုတ် လာခဲ့ ပြီး ပွဲအစ ၆ မိနစ် မှာတင် ဂရစ်ဇ်မန်း က မက်ဆီ ရဲ့ ဖန်တီးမှု ကို အဆုံးသတ် ကာ ဘာကာ အတွက် ဦးဆောင်ဂိုး သွင်းယူ ပေးခဲ့ ပါတယ် ။
အဖွင့်ဂိုး ရအပြီး ၉ မိနစ် အကြာ မှာ အာသာမီလို က ဘာစီလိုနာ အတွက် ဒုတိယ မြောက် ဂိုး ကို သွင်းယူပေး ခဲ့ပြီး ၄၄ မိနစ် မှာတော့ ဆန်တီ ကာဇိုလာ က ဗီလာရီးရဲ အတွက် ချေပဂိုး ၁ ဂိုး ပြန်သွင်းယူ ခဲ့ ပါတယ် ။ ပထမ ပိုင်း အပြီး မှာတော့ မက်ဆီ ဟာ ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ ပြီး ဒမ်ဘီလီ နဲ့ လူစား လဲခဲ့ ရ ပါတယ် ။
ပွဲ အပြီး မှာတော့ မက်ဆီ ရဲ့ ဒဏ်ရာ ရရှိမှု နဲ့ပတ်သက် ပြီး မေးမြန်း ရာမှာတော့ ဂရစ်ဇ်မန်း က “ကျွန်တော် စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိ ပါတယ်” လို့ အစပြု ကာ ဖြေကြား သွားခဲ့ တာပဲ ဖြစ် ပါတယ် ။ မက်ဆီ အနေ ဖြင့် လာမယ့် ပိတ်ရက် မှာ ကစားမယ့် လာလီဂါ ပွဲ ကို လွဲချော် ဖို့ အလားအလာ များ နေတယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
Barcelona’s French forward Antoine Griezmann reacts after winning the Spanish league football match between FC Barcelona and Villarreal CF at the Camp Nou stadium in Barcelona, on September 24, 2019. (Photo by LLUIS GENE / AFP)
“သူ နည်းနည်း နာသွား ပါတယ် ။ ဘယ်လောက် ပြင်းမလဲ ဆိုတာ တော့ ကျွန်တော် မသိပါဘူး ။ ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ သူ ဒဏ်ရာ ရပြီး ထွက် မသွားခင် မှာ သူနဲ့ စကား မပြော ဖြစ်လိုက် လို့ပါ ။ အဲ့ အချိန်တုန်း က နည်းပြ က ကျွန်တော့ ကို နည်းစနစ် ပိုင်း ဆိုင်ရာ ညွှန်ကြား ချက်တွေ ပေးနေတာ မို့ သူ့ အနားကို မသွားနိုင် ခဲ့ ပါဘူး”
“ဒဏ်ရာ ကစား သမား အချို့ ပြန်ကောင်း လာပါပြီ ။ အသင်း ကို ကောင်းနိုင် သမျှ ကောင်းအောင် တည်ဆောက် သွားမှာပါ ။ အကောင်းဆုံး ပုံစံ မဟုတ်သေး ပေမယ့် တစ်ပွဲ ထက် တစ်ပွဲ တော့ တိုးတက် လာပြီ လို့ ယူဆ မိပါတယ်”
“ပထမပိုင်း နဲ့ ဒုတိယပိုင်း မှာ ဘာတွေ ခြားနား သွားလဲ ဆိုတာ ကျွန်တော် သေချာ သတိမထား မိပါဘူး ။ အခွင့် အရေး အချို့ ရပေမယ့် လွဲချော် ခဲ့ ပါတယ် ။ အခု ထက် ပိုကောင်းအောင် ကစားနိုင် ဖို့ ကြိုးစား ရဦးမှာ ပါ ။ မက်ဆီ ဒဏ်ရာ ရသွားတဲ့ အတွက် တော့ ၀မ်းနည်း စိတ်ပျက် မိပါတယ်” လို့ ဂရစ်ဇ်မန်း က ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ဘာစီလိုနာ ဟာ ဒီရာသီ အဝေးကွင်း တွေ မှာ ရလဒ် မကောင်း ဖြစ်နေ ခဲ့ပြီး ပြိုင်ပွဲစုံ ၄ ပွဲ မှာ ၂ ပွဲ သရေ ၊ ၂ ပွဲ ရှုံး နိမ့် ထားခဲ့ ပါတယ် ။ လာမယ့် အပတ် မှာ ဘာစီလိုနာ ဟာ ဂီတာဖေး အသင်းရဲ့ ကွင်းကို သွားရောက် ယှဉ်ပြိုင် ရမှာ ဖြစ်ပြီး မက်ဆီ မပါဝင် နိုင်ပါက ရုန်းကန် ရဖွယ် ရှိနေ ပါတယ် ။
မက်ဆီ ရဲ့ ဒဏ်ရာ အတိမ် အနက် ကိုတော့ အသင်း က ထုတ်ပြန်ခြင်း မပြုသေးပါဘူး ။ ဘာစီလိုနာ ဟာ ဂီတာဖေး ပွဲ ပြီးပါက အင်တာ မီလန် ( ချန်ပီယံ လိဂ် ) ၊ ဆီဗီးလား တို့ နဲ့ ပွဲကျပ်တွေ ဆက်တိုက် ကစား ရဦးမှာ ဖြစ် ပါတယ် ။
မကျဆီ အတှကျ စိတျမကောငျးဖွဈနမေိတဲ့ ဂရဈဇျမနျး
ဘာစီလိုနာ အသငျး တိုကျစဈမှုး အနျတှိုငျ ဂရဈဇျမနျး ကတော့ ယမနျနေ့ ညက ကစား ခဲ့တဲ့ လာလီဂါ ပှဲစဉျ မှာ အသငျး ဖျော လီယှနျနယျ မကျဆီ ဒဏျရာ ရရှိ သှားခဲ့ မှု နဲ့ ပတျသကျ ပွီး ၀မျးနညျး စိတျမကောငျး ဖွဈ မိခဲ့ ပါတယျ လို့ ထုတျဖျော ပွောဆို သှားခဲ့ ပါတယျ ။ မကျဆီ ဟာ ဗီလာ ရီးရဲ အသငျး ကို ၂ – ၁ ဖွငျ့ အနိုငျ ရခဲ့တဲ့ မနေ့ ညက ပှဲ ရဲ့ ပထမပိုငျး အပွီး မှာ ဒဏျရာ ကွောငျ့ လူစားလဲ ခဲ့ ရတာ ဖွဈပါတယျ ။
ဘာစီလိုနာ အသငျး ဟာ ဒီရာသီ အတှကျ ပထမဆုံး အကွိမျ အဖွဈ မကျဆီ ၊ ဂရဈဇျမနျး ၊ ဆှာရကျ တိုကျစဈ အတှဲ ကို ပှဲထုတျ လာခဲ့ ပွီး ပှဲအစ ၆ မိနဈ မှာတငျ ဂရဈဇျမနျး က မကျဆီ ရဲ့ ဖနျတီးမှု ကို အဆုံးသတျ ကာ ဘာကာ အတှကျ ဦးဆောငျဂိုး သှငျးယူ ပေးခဲ့ ပါတယျ ။
အဖှငျ့ဂိုး ရအပွီး ၉ မိနဈ အကွာ မှာ အာသာမီလို က ဘာစီလိုနာ အတှကျ ဒုတိယ မွောကျ ဂိုး ကို သှငျးယူပေး ခဲ့ပွီး ၄၄ မိနဈ မှာတော့ ဆနျတီ ကာဇိုလာ က ဗီလာရီးရဲ အတှကျ ခပြေဂိုး ၁ ဂိုး ပွနျသှငျးယူ ခဲ့ ပါတယျ ။ ပထမ ပိုငျး အပွီး မှာတော့ မကျဆီ ဟာ ဒဏျရာ ရရှိခဲ့ ပွီး ဒမျဘီလီ နဲ့ လူစား လဲခဲ့ ရ ပါတယျ ။
ပှဲ အပွီး မှာတော့ မကျဆီ ရဲ့ ဒဏျရာ ရရှိမှု နဲ့ပတျသကျ ပွီး မေးမွနျး ရာမှာတော့ ဂရဈဇျမနျး က “ကြှနျတျော စိတျမကောငျး ဖွဈမိ ပါတယျ” လို့ အစပွု ကာ ဖွကွေား သှားခဲ့ တာပဲ ဖွဈ ပါတယျ ။ မကျဆီ အနေ ဖွငျ့ လာမယျ့ ပိတျရကျ မှာ ကစားမယျ့ လာလီဂါ ပှဲ ကို လှဲခြျော ဖို့ အလားအလာ မြား နတေယျလို့ သိရ ပါတယျ ။
“သူ နညျးနညျး နာသှား ပါတယျ ။ ဘယျလောကျ ပွငျးမလဲ ဆိုတာ တော့ ကြှနျတျော မသိပါဘူး ။ ဘာလို့လညျး ဆိုတော့ သူ ဒဏျရာ ရပွီး ထှကျ မသှားခငျ မှာ သူနဲ့ စကား မပွော ဖွဈလိုကျ လို့ပါ ။ အဲ့ အခြိနျတုနျး က နညျးပွ က ကြှနျတော့ ကို နညျးစနဈ ပိုငျး ဆိုငျရာ ညှနျကွား ခကျြတှေ ပေးနတော မို့ သူ့ အနားကို မသှားနိုငျ ခဲ့ ပါဘူး”
“ဒဏျရာ ကစား သမား အခြို့ ပွနျကောငျး လာပါပွီ ။ အသငျး ကို ကောငျးနိုငျ သမြှ ကောငျးအောငျ တညျဆောကျ သှားမှာပါ ။ အကောငျးဆုံး ပုံစံ မဟုတျသေး ပမေယျ့ တဈပှဲ ထကျ တဈပှဲ တော့ တိုးတကျ လာပွီ လို့ ယူဆ မိပါတယျ”
“ပထမပိုငျး နဲ့ ဒုတိယပိုငျး မှာ ဘာတှေ ခွားနား သှားလဲ ဆိုတာ ကြှနျတျော သခြော သတိမထား မိပါဘူး ။ အခှငျ့ အရေး အခြို့ ရပမေယျ့ လှဲခြျော ခဲ့ ပါတယျ ။ အခု ထကျ ပိုကောငျးအောငျ ကစားနိုငျ ဖို့ ကွိုးစား ရဦးမှာ ပါ ။ မကျဆီ ဒဏျရာ ရသှားတဲ့ အတှကျ တော့ ၀မျးနညျး စိတျပကျြ မိပါတယျ” လို့ ဂရဈဇျမနျး က ပွောဆို သှားခဲ့ ပါတယျ ။
ဘာစီလိုနာ ဟာ ဒီရာသီ အဝေးကှငျး တှေ မှာ ရလဒျ မကောငျး ဖွဈနေ ခဲ့ပွီး ပွိုငျပှဲစုံ ၄ ပှဲ မှာ ၂ ပှဲ သရေ ၊ ၂ ပှဲ ရှုံး နိမျ့ ထားခဲ့ ပါတယျ ။ လာမယျ့ အပတျ မှာ ဘာစီလိုနာ ဟာ ဂီတာဖေး အသငျးရဲ့ ကှငျးကို သှားရောကျ ယှဉျပွိုငျ ရမှာ ဖွဈပွီး မကျဆီ မပါဝငျ နိုငျပါက ရုနျးကနျ ရဖှယျ ရှိနေ ပါတယျ ။
မကျဆီ ရဲ့ ဒဏျရာ အတိမျ အနကျ ကိုတော့ အသငျး က ထုတျပွနျခွငျး မပွုသေးပါဘူး ။ ဘာစီလိုနာ ဟာ ဂီတာဖေး ပှဲ ပွီးပါက အငျတာ မီလနျ ( ခနျြပီယံ လိဂျ ) ၊ ဆီဗီးလား တို့ နဲ့ ပှဲကပျြတှေ ဆကျတိုကျ ကစား ရဦးမှာ ဖွဈ ပါတယျ ။